KMF/Cnoe – Covid-19 : “Ilaina ny fifampitokisana… “ | NewsMada
KMF/Cnoe – Covid-19 : “Ilaina ny fifampitokisana… “
Par Taratra sur 01/08/2020
“Takina sy ilaina ny fitokisan’ny olom-pirenena. Te­neninay efa tamin’ny roa taona lasa, ary averinay hatrany: ny tambim-pitokisana no olana teo amin’ny firenentsika” hoy ny filoha nasionalin’ny KMF/Cnoe, Andriamalazaray Ando­ni­aina.
Rehefa tsy matoky ny mpi­tondra azy ny olona entina, mivadika ho ratsy ny tsara rehetra. Mila apetraka ny fifampitokisana. Anjaran’ny tsirairay avy ny miandrai­kitra izany, indrindra ho an’ ireo mpindram-pahefana. Ireo no manana adidy betsaka kokoa noho ny olom-pirenena entina amin’ny fampanjariana ny fangaraharana sy tamberin’andraikitra.
Na izany aza, tsy mila kisa ny amin’ny fangaraharan’ny fitantanana ireo fanampiana iadiana amin’ny Covid-19 ry zareo. Rehefa ao anatin’ny fahamehana ny firenena iray, na ara-pahasalamana io na tsia: be ny zavatra miova, na ny dingana arahina fotsiny aza.
Serasera fitantanana krizy no tokony hatao
Ao anatin’ny fitantanana loza na fifehezana krizy, ma­nan-danja lehibe ny fitantanana ny serasera, tsy serasera politika. Serasera momba ny ady amin’ny covid-19. “Re­hefa mifantoka be dia be any amin’ny politika, ohatra, ny serasera atao, lasa sahirana isika. Ny lohany eto amin’ny firenena no tokony ho fakan-kevitra farany, rehefa tena sahirana isika”, hoy izy.
Raha mifamadika amin’ izany no mitranga: ny mpitarika indray no miteny voalohany; rehefa misy zavatra tsy mety, iza no hitarainana? Lojika raha tsy mahita am­bara loatra, ny minisiteran’ ny Fahasalamana, rehefa mi­aloha lalana azy ny politika. Tokony harenina izany.